Guddiga Doorashooyinka oo maanta 10 xisbi guddoonsiiyay shahaadooyinka ku-meel-gaarka ah – Kalfadhi
Guddiga Doorashooyinka oo maanta 10 xisbi guddoonsiiyay shahaadooyinka ku-meel-gaarka ah
August 17, 2020 August 17, 2020 Hassan Istiila
Guddiga Madaxabanaan ee doorashooyinka Qaranka dalka Soomaaliya ayaa maanta shahaadooyinka KMG gudoonsiiyay 10 xisbi oo ku biiriya xisbiyadii GMDQ uu horey u diwaangaliyay.
Xisbiyadaan cusub ee la diiwaan geliyay ayaa kala ah: Xisbiga Wadaniga ee Israac, Xisbiga Isbedelka Dimoqraadiga ah, Xisbiga Hayaan, Xisbiga Dhulka Hooyo, Xisbiga Dhalinyarada Soomaaliyeed, Xisbiga Siyaasadeedka Hogaanshe, Xisbiga Astaan Qaran, Xisbiga Nabadda iyo Xallinta Khilaafaadka Soomaaliyeed, Xisbiga Dib-u-heshiinta iyo Horumarinta iyo Xisbiga Runta iyo Caddaaladda.
Diiwaangeliyaha Xafiiska Diiwaangelinta Xisbiyada ee GMDQ Maxamed Cumar Axmed Haydara oo munaasabada ka hadlay ayaa ku ammaanay masuuliyiinta xisbiyada dadaalka ay ugu jiraan sidii Soomaaliya uga dhaci lahayd doorasho xalaal ah, waxuuna kula dar daarmay in ay u diyaar garoobaan qaadashada shahaadada diiwaangelinta rasmiga oo ah tan doorashada lagu geli doono.
Dhinaca kale gudoomiye-yaasha xisbiyada ayaa ka mahad-celiyey sidii hufneyd ee uu GMDQ ula shaqeeyey intii ay ku guda jireen diyaarinta hawlaha is-diiwaan-gelinta ee maanta u qabsoontay.
Kumushineer Xuseen Cabdi Aadan oo munaasabada soo xiray ayaa masuuliyiinta Xisbiyada kula dardaarmay inay ilaaliyaan shuruucda xisbiyada u yaala si loo gaaro hadafka ah in dalka doorasho dimoqraadi ah ka dhacdo.
Puntland oo shuruud ku xirtay ka qeyb-galka Shirka Dhuusamareeb saddex
Guddoonka Golaha Shacabka oo cambaareeyay weerarkii Hotel Elite iyo Qarax lagu weeraray Xildhibaan Goodax Bare